Mpamatsy voajanahary voajanahary mandrehitra tena mpamatsy kodiarana Composting Turner Machine mpamatsy sy orinasa | YiZheng
Inona ny masinina kodiarana?
Masinina kodiarana Composting Turner Machine dia fitaovana fampivarotana zava-dehibe ao amin'ny orinasa mpamokatra zezika biolojika lehibe. Ny turner compost misy kodiarana dia afaka mihodina mandroso, mihemotra ary maimaimpoana, izany rehetra izany dia olona iray no miasa. Ny kodiarana composting misy kodiarana dia miasa eo ambonin'ny compost tape izay namboarina mialoha; ny antsy rotary apetraka amin'ny amponga mahery mihodina eo ambanin'ny fitoeran-traktera dia fitaovana fampifangaroana, famahana na famindrana stacks.
Fampiharana ny Machine Wheel Type Composting Turner
Masinina kodiarana Composting Turner Machine dia be mpampiasa amin'ny fanamasinana sy ny fanalana rano toy ny zavamaniry zezika organika, zavamaniry zezika mitambatra, fambolena maloto sy fako, fambolena zaridaina ary zavamaniry holatra.
1. Mety amin'ny fermentation aerobic, azo ampiasaina miaraka amin'ny efitrano fermentation amin'ny masoandro, tanky fermentation ary shifters.
2. Ny vokatra azo avy amin'ny fanamasinana aerobika maripana avo lenta dia azo ampiasaina amin'ny fanatsarana ny tany, ny fambolena zaridaina, ny fanotofana tany, sns.
1. Masinina kodiarana Composting Turner Machine afaka mandroso, mihemotra ary mihodina malalaka ary ireo fihetsika rehetra ireo dia ampiasain'ny olona iray.
2. Ireo akora biolojika dia tokony apetraka aloha amin'ny tany na amin'ny atrikasa amin'ny endriny.
3. Ny compost turner dia miasa amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny zezika alona mialoha; antsy mihodina napetraka amin'ny amponga mahery rotary ao ambanin'ny traktera no fitaovana marina hampifangaroana, hamaha na hamindra zezika niavosa.
4. Rehefa avy mihodina dia miforona ny antontam-bato misy zezika vaovao ary miandry ny hanohizana ny fanamasinana.
5. Misy ny thermometer ny zezika handrefesana ny hafanan'ny zezika ka hiova fanindroany.
Tombony azo amin'ny milina turner Composting Turner karazana
1. Ny halalin'ny fihodinana avo: ny 1.5 lalina mety ho 1.5-3m;
2. Ny fihodinan'ny lehibe: ny sakany lehibe indrindra dia mety ho 30m;
3. Ny fanjifana angovo ambany: mampiasa mekanika fandefasana angovo tsy manam-paharoa, ary ny fanjifana angovo amin'ny volan'ny fiasa mitovy dia ambany 70% noho ny an'ny fitaovana fihodina nentim-paharazana;
4. Mihodina tsy misy zoro maty: ny hafainganam-pandehan'ilay mihodina dia ao amin'ny simetrika, ary eo ambanin'ny famindrana ny goverinam-panjakana goavambe dia tsy misy zoro maty;
5. Haavo avo lenta amin'ny automatique: miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso mandeha ho azy mandeha ho azy, rehefa miasa ny turner nefa tsy mila mpandraharaha akory.
Fampisehoana horonan-tsary momba ny kodiarana karazana kodiarana
Safidy maodely karazana Composting Turner Machine
Hery lehibe (kw)
Fandraisana herinaratra finday (kw)
Herinaratra tsy mitanjozotra (kw)
Mihodina sakany (m)
Mihodina lalina (m)
Teo aloha: Tondra-drano mitsivalana marindrano
Manaraka: Turner fanodinana visy roa